Xiaomi Mi Rịba ama 10: Nkọwa, ọnụahịa na igba egbe | Gam akporosis
Ihe ngosi Xiaomi Mi 10 ka emegoro ka emebere ya
Emechara gosipụta Xiaomi Mi Note 10 na Spain, dị ka ọkwa ndị China si maa ọkwa ụbọchị ole na ole gara aga. Ihe nlere anya nke a na-echesi ike, n'ihi na ọ na-ekwe nkwa ịbụ ekwentị a ma ama n'ọhịa nke foto. Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị a mbipute mba nke Xiaomi CC9 Pro, gosipụtara kwa izu a.
Anyị na-eguzo n'ihu ekwentị nke na-apụ maka igwefoto ya, nke nwere ihe nzụta azụ ise, nke onye isi ihe mmetụta 108 MP na-achịkwa. Ya mere, nke a Xiaomi Mi Rịba 10 bụ isi na akụkụ ụfọdụ ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na ahịa dị ugbu a, dịka ị pụrụ ịhụ.
Ma imewe, ya na ihuenyo ya nwere akara n'ụdị mmiri mmiri na ụfọdụ okpokolo agba, dị ka nkọwa ha, ha bụ otu ihe ahụ anyị hụtụrụla na CC9 Pro. Anyị na-ahụ ekwentị n'ime etiti dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ. Ihe a haziri bụ nke dị ugbu a, ọ dịkwa ezigbo mma, na ihe ọ sensorụ optụ mkpịsị aka ihe ntanetị dị na ihuenyo.
Xiaomi Mi CC9 Pro na-abụ onye ọrụ na igwefoto penta 108 MP na karịa 5000 mAh batrị
1 Nkọwa Xiaomi Mi Rịba ama 10
Nkọwa Xiaomi Mi Rịba ama 10
Ọ dị ka a-akpali nnọọ mmasị ekwentị maka ọrụ. Xiaomi Mi Rịba ama 10 abụghị naanị na-egosipụta maka igwefoto ya dị ukwuu, mana ahapụ anyị na ezigbo batrịỌ nwere ezigbo nhazi ma zute ihe ndị ahịa taa na-achọ na mpaghara ahịa a. Ya mere, ọ bụ nhọrọ dị mma ịtụle, nke na-ekwe nkwa ezigbo ego. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ekwentị:
Ngosipụta: 6,47-inch AMOLED nwere mkpebi nke 1080 x 2340 pikselụ
Nchekwa dị n'ime: 128 GB
Igwefoto na-esote: 108 MP Samsung ISOCELL Bright HMX isi ihe mmetụta + 20 MP obosara-akụkụ ihe mmetụta + 2 MP 12x telephoto + 5 MP 5x telephoto + 2 MP macro sensor
Igwe n'ihu: 32 MP
Batrị: 5.260 mAh na 30 W ụgwọ ngwa ngwa
Njikọta: Dual SIM, 4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, Bluetooth, USB-C, 3.5mm jack headphone, FM redio
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka mkpịsị aka nyocha n'okpuru ihuenyo, NFC, infrared emitter
Akụkụ: 157,8 x 74,2 x 9,67 mm
Arọ: gram 208
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo 9 achịcha na MIUI 11
Ekwentị na-agbanye na mbụ na ahịa ka nwere ihe mmetụta 108 MP, nke doro anya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị pụta ìhè na ya. Dị ndị China ejirila ihe egwu dị egwu, mana ha na-aga n'ihu ndị asọmpi ma gosipụta ike nke ihe nlereanya a. Ọbụghị naanị ihe mmetụta a dị mkpa, ebe ọ bụ na ihe mmetụta anọ ndị ọzọ nke Xiaomi Mi Note 10 bụkwa isi. Senfọdụ ihe mmetụta ndị ekpughereworị tupu ya ngosi zuru ezu. Yabụ anyị nwere ike ịtụ anya nnukwu ihe n'akụkụ a.
Ọ bụghị naanị na ese foto ya bụ isi ihe dị na ihe nlereanya a. Ọzọkwa batrị dị ezigbo mma na Xiaomi Mi Rịba 10, nwere ikike nke 5.260 mAh, nke ọ ga-enye anyị nnwere onwe dị ukwuu n'oge niile. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ ihe ngwa ngwa 30W na ya, nke bụ ihe ọzọ dị mkpa. Ọ na-abịa na gam akporo 9, ọ bụ ezie na ị na-eji MIUI 11. N'ezie, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-enwe ike nweta mmelite ahụ na gam akporo 10, ọ bụ ezie na ọ nweghị ụbọchị.
Ọ gaghị ewe oge tupu ekwentị abata na Spain, dịka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na nkwupụta ya. Ka ọ dị na Nọvemba 15 Ọ ga-ekwe omume ịzụta Xiaomi Mi Note 10 na Spain. Ọ na-ebupụta na otu ụdị nke RAM na nchekwa, dị ka a hụrụ na ọkwa ya. Ekwentị ga-adị na ụlọ ahịa ndị a na-emebu ebe enwere ekwentị nke akara ndị China.
Ọnụahịa ahụ bụ akụkụ nke kpatara mmasị na obi abụọ. Na nke a, Xiaomi Mi Note 10 bụ otu n'ime ụdị dị oke ọnụ nke ika ahụ hapụrụ anyị, na ego nke 549 euro. Obi abụọ adịghị ya, ihe ọhụrụ e ji mee ya, ọkachasị na igwefoto, bụ ihe a ga-akwụrịrị ma na-egosi ọnụ ahịa dị elu karịa ka ọ dị na mbụ. Kedu ihe ị chere gbasara mmalite nke ụdị a na Spain?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe ngosi Xiaomi Mi 10 ka emegoro ka emebere ya
Nrọ ahụ mezuru: Xiaomi Smart TV na-abata na Spain
Huawei Nova 6 abụrụla ihe nzuzu yana nkọwa ya na ọnụahịa ya niile